Teny Malagasy ho fampianarana ny zaza Malagasy | GAZETY_ADALADALA
Filed under: politika, tantaram-pirenena, tapatapany | Tagged: 1972, 1977, 1989, fampianarana, fanagasiana, teny Malagasy |
« Ny tontolon’ny asam-panjakana Malagasy Famonjena nitera-doza (Topicana II) »
sipakv, on 15/07/2008 at 6:10 said:
Tena midera anao avylavitra nametraka an’ity lahatsoratra ity fa tena voakasika ao anatin’ilay resaka daholo ny fanontaniana mety misy amin’ny olona te hanadihady ny momba ny fanagasiana.
Rajason Lova, on 14/05/2015 at 12:42 said:
Manohina ny fo, ary tena marina mihitsy, ilay tenin’Andriamatoa Ratrema manao hoe : ny fiverenana amin’ny teny Malagasy eo amin’ny fanabeazana ny ankizy, eo amin’ny fampianarana, dia manisy hasina ny maha-malagasy antsika. Ny ankizy manome hasina ny tenany, ary manome hasina ny ray aman-dreny. Izany hoe, ny tsy fampiasana ny teny malagasy any ampianarana, dia mety mitarika ny ankizy anao tsinotsinona ny tenany sy anao tsinotsinona ny masoandro nipoirany. Tsy afaka mivalapatra aho fa mba hatsiky izay azoko tamin’ny lahatsoratra etsy ambony.
Tiako tsindriana koa ny zavatra ho tonga ho antsika Malagasy amin’ny fiverenana amin’ny teny malagasy eo amin’ny fampianarana: malalaka midanadana ny lalana mankany amin’ny tena fandrosoana. Tsarovy fa ireo firenena tena mandroso, na tena an-dalam-pandrosoana, dia ireo izay nitana ny teniny: « Japan » « Korea atsimo » sns. Jereo anie ilay lojika e! Tany an-kibo ny ankizy iray dia efa naheno ny teny Malagasy. Rehefa manomboka mianatra izy, dia efa enin-taona izy no niteny Malagasy. Mazava fa azony daholo izay lazain’ny mpampianatra. Nefa raha amin’ny teny vahiny ny fampianarana, dia very enin-taona ilay malagasy kely. Iny enin-taona iny anefa dia misy lanjany lehibe eo amin’ny fampandrosoana ny firenena.
Raha miverina amin’ny teny Malagasy isika, dia zavatra roa nohitranga. Faly ny Frantsay satria tsy hazoto handeha hivoaka ho any Frantsa intsony ny Malagasy. Ny faharoa dia izao, faly isika fa handroso i Madagasikara.